Vasomotor Rhinitis (နှာခေါင်းအမြှေးပါးရောင် နှာရည်ယိုရောဂါ) : ရောဂါလက္ခဏာတွေ၊ ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေနဲ့ ကုသမှုတွေအကြောင်း Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Vasomotor Rhinitis (နှာခေါင်းအမြှေးပါးရောင် နှာရည်ယိုရောဂါ)
Vasomotor Rhinitis (နှာခေါင်းအမြှေးပါးရောင် နှာရည်ယိုရောဂါ)
Vasomotor Rhinitis (နှာခေါင်းအမြှေးပါးရောင် နှာရည်ယိုရောဂါ) ကဘာလဲ။
ဒီရောဂါဟာ ဓါတ်မတည့်မှုကြောင့် ဖြစ်သော ရောဂါမဟုတ်ချေ။ အကြောင်းရင်းမရှိဘဲ နှာခေါင်းအမြှေးပါးရောင်ပြီး နာတာရှည်နှာချေခြင်း သို့ နှာပိတ်ခြင်း၊ နှာရည်ယိုခြင်းတွေ တွေ့ရနိုင်တဲ့ ရောဂါတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အသက်အန္တရာယ်တော့ မရှိပါဘူး။ ဆိုးဆိုးရွားရွားမဟုတ်တဲ့ မသက်မသာခံစားရမှုတွေ တွေ့ရနိုင်ပါတယ်။
Vasomotor Rhinitis (နှာခေါင်းအမြှေးပါးရောင် နှာရည်ယိုရောဂါ) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
အဖြစ်များပါတယ်။ အရွယ်အားလုံးဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ အသက်၂၀အထက်တွေမှာ ပိုတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေမှာ အမျိုးသားတွေထက် ဖြစ်နိုင်ချေနှစ်ဆပိုများပါတယ်။ ဖြစ်စေနိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းတွေကို ရှောင်ရှားခြင်းဖြင့် ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။ အသေးစိတ်သိလိုတယ်ဆိုရင်တော့ ဆရာဝန်နဲ့ သွားပြသင့်ပါတယ်။
Vasomotor Rhinitis (နှာခေါင်းအမြှေးပါးရောင် နှာရည်ယိုရောဂါ) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ။
ဖြစ်လိုက်ပျောက်လိုက်နဲ့ တစ်နှစ်ပတ်လုံးတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ မကုသဘူးဆိုရင် ရက်သတ္တပတ်တွေအများကြီး သို့ အကြာကြီး ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။ တွေ့ရများတဲ့လက္ခဏာတွေကတော့
• နှာခေါင်းအနောက်ပိုင်းနှာရည် သို့ အချွဲများ လည်ချောင်းထဲသို့စီးသွားခြင်း
• ဆေးဆိုင်ကဆေးတွေ ဆေးမြီးတိုတွေနဲ့ကုလို့ မသက်သာရင်
• ဆရာဝန်ညွှန်ထားတဲ့ဆေးတွေ သို့ ဆေးဆိုင်ကစပ်ပေးတဲ့ဆေးတွေကြောင့် အခြားဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ ရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင်
Vasomotor Rhinitis (နှာခေါင်းအမြှေးပါးရောင် နှာရည်ယိုရောဂါ) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ။
သင့်နှာခေါင်းထဲကသွေးကြောတွေ ကျယ်လာခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျယ်လာခြင်းကနေ ရောင်ရမ်းခြင်း၊ ပိတ်ဆို့ခြင်းနဲ့ နှာခေါင်းထဲမှာအချွဲတွေပြည့်လာနိုင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့် နှာခေါင်းသွေးကြောတွေ ရောင်ရတယ်ဆိုတာတော့ မပြောနိုင်သေးပါဘူး။ ဖြစ်နိုင်ချေများစေတဲ့အချက်တွေကတော့
• ရေမွှေး၊ အနံ့အသက်၊ ဆေးလိပ်နံ့စတဲ့ စိတ်ကသိကအောက်ဖြစ်စရာများ
• ရာသီဥတုအပြောင်းအလဲ အထူးသဖြင့် ပူအိုက်တဲ့ရာသီ
• အအေးမိ၊တုပ်ကွေးပိုးကဲ့သို့သော ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးများ ကူးစက်ခံရခြင်း
• ပူစပ်သောအစားများ အရည်များ
• aspirin (သို့) ibuprofenကဲ့သို့သော ဆေးများ
• သန္ဓေတားဆေးများအသုံးပြုခြင်း ၊ သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းနည်းခြင်း ကဲ့သို့သော ဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲများ
Vasomotor Rhinitis (နှာခေါင်းအမြှေးပါးရောင် နှာရည်ယိုရောဂါ) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ။
• မီးခိုးငွေ့၊ ဆေးလိပ်ငွေ့စသော စိတ်ကသိကအောက်ဖြစ်စရာများ
• အသက်၂၀အထက် (ဓါတ်မတည့်မှုကြောင့်ဖြစ်တဲ့နှာရည်ယိုရောဂါတွေနှင့် မတူညီပါ။ ဒီရောဂါသည် အသက်၂၀ပြည့်ပြီးနောက်မှာ အများဆုံးဖြစ်တတ်ပါတယ်။)
• ရင်ကျပ်ပျောက်ဆေးအရည်တွေ ဖြန်းဆေး တွေ ကြာကြာအသုံးပြုခြင်း။ (Afrin၊ Dristan ကဲ့သို့သော ရင်ကျပ်ပျောက်ဆေးအရည်တွေ ဖြန်းဆေး တွေ ရက်အတော်ကြာ သုံးပြီးနောက်ပိုင်း ရင်ကျပ်ပျောက်ခြင်းသက်သာသွားပြီး ဆိုးဆိုးရွားရွားနှာပိတ်ခြင်း)
• အမျိုးသမီးများ (ဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲများကြောင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်၊ ဓမ္မတာလာချိန်မှာ ပိုဆိုးသွားနိုင်ပါတယ် ။)
• အချို့သောကျန်းမာရေးပြဿနာများ ( သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းနည်းခြင်၊ နာတာရှည်အမောရောဂါကဲ့သို့သော နာတာရှည်ကျန်းမာရေးပြဿနာများ
• စိတ်ဖိစီးမှု ( စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာတွေကြောင့် အချို့သောသူတွေမှာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ။်)
Vasomotor Rhinitis (နှာခေါင်းအမြှေးပါးရောင် နှာရည်ယိုရောဂါ) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
သင့်မှာ နှာရည်ယိုရောဂါလက္ခဏာတွေ ရှိနေပြီဆိုရင် ဓါတ်မတည့်မှုကြောင့် (သို့) အခြားသောအကြောင်းတွေကြောင့် ဟုတ်မဟုတ်အရင်စမ်းသပ်ပါလိမ့်မယ်။ အခြားကြောင့်ဖြစ်တာ မဟုတ်ကြောင်း သိပြီးနောက်မှာတော့ သင့်မှာ နှာရည်ယိုခြင်း၊ နှာပိတ်ခြင်း၊ နှာရည်လည်ချောင်းထဲဝင်ခြင်းတွေ ရှိနေခြင်းတွေက နှာခေါင်းအမြှေးပါးရောင် နှာရည်ယိုရောဂါ
ဓါတ်မတည့်မှုကြောင့်ဟုတ်မဟုတ်သိချင်ရင်တော့ အရေပြားဓါတ်မတည့်မှုစစ်ခြင်း၊ သွေးစစ်ဆေးခြင်းတွေ ပြုလုပ်ပါလိမ့်မယ်။ နာတာရှည်လေအိတ်ရောင်ရောဂါကြောင့်ဟုတ်မဟုတ် သိချင်ရင်တော့ နှာခေါင်းနှင့် ဦးခေါင်းခွံရိုးကို ဆက်သွယ်ထားသော လှိုဏ်ခေါင်းပေါက် sinus ကို ကွန်ပျူတာဓါတ်မှန်ရိုက်ခြင်း (CT scan) တွေ ပြုလုပ်ပါလိမ့်မယ်။ သင့်တော်တဲ့ကုသမှုပေးနိုင်ဖို့ မှန်ကန်စွာအဖြေထုတ်နိုင်ဖို့တော့ လိုပါတယ်။
Vasomotor Rhinitis (နှာခေါင်းအမြှေးပါးရောင် နှာရည်ယိုရောဂါ) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
သင့်လက္ခဏာတွေဆိုးလာမယ်ဆိုရင် သင့်ဆရာဝန်က အခြားဆေးတွေညွှန်ဖို့ လိုလာပါလိမ့်မယ်။ သွေးကြောရောင်နှာရည်ယိုရောဂါ ကုသနိုင်တဲ့ဆေးတွေကတော့
• fluticasone (Flonase) (သို့) triamcinolone (Nasacort)ကဲ့သို့သော စတီးရွိုက်ပါသောနှာဖြန်းဆေးများ
• azelastine (Astelin၊ Astepro)၊ olopatadine hydrochloride (Patanase) ကဲ့သို့သော Antihistamine နှာခေါင်းဖြန်းဆေးများ
• ipratropium (Atrovent)ကဲ့သို့သော Anti-drip anticholinergic နှာခေါင်းဖြန်းဆေးများ
• pseudoephedrine ကဲ့သို့သော သောက်ရသော ရင်ကျပ်ပျောက်ဆေးများ
တစ်ခါတစ်ရံမှာတော့ နှာခေါင်းအသားလုံးများဖယ်ထုတ်ရန်နှင့် နှာခေါင်းဆက်ကြားလွဲနေသည်ကို တည့်ပေးရန် ခွဲစိတ်ကုသခြင်းက ပိုအကျိုးရှိပါလိမ့်မယ်။ အခြားကုသမှုတွေနဲ့ မသက်သာလာတော့မှ ခွဲစိတ်ကုသဖို့ စဉ်းစားလေ့ရှိပါတယ်။
လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးတွေအသုံးပြုခြင်းက နှာခေါင်းအမြှေးပါးရောင် နှာရည်ယိုရောဂါ ကို ကုသရာမှာ ဘယ်လိုအထောက်အကူပြုနိုင်မလဲ။
အောက်ဖော်ပြပါ လူနေမှုပုံစံများနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးများက သင့်အနေဖြင့် နှာခေါင်းအမြှေးပါးရောင်၊ နှာရည်ယိုရောဂါ ကိုကုသတဲ့နေရာမှာနဲ့ လိုက်လျော ညီထွေဖြစ်အောင် နေတဲ့နေရာတွေမှာ အကူအညီပေးနိုင်ပါတယ်။
• ဆေးဆိုင်တွေမှာ အလွယ်တကူဝယ်လို့ရနိုင်တဲ့ ဆားရည်နှာဖြန်းဆေး
• pseudoephedrine (သို့) phenylephrine ကဲ့သို့သော ရင်ကျပ်ပျောက်ဆေးများ
• diphenhydramine (Benadryl)၊ clemastine၊ loratadine (Claritin) ကဲ့သို့သော Antihistamine နှာခေါင်းဖြန်းဆေးများ
• fluticasone (Flonase) (သု့ိ) triamcinolone (Nasacort) ကဲ့သို့သော စတီးရွိုက်ပါသောနှာဖြန်းဆေးများ
https://medlineplus.gov/ency/article/001648.htm. Accessed July 25, 2016.
Vasomotor Rhinitis (VMR) or idiopathicnon-allergic rhinitis.
http://www.allergyclinic.co.nz/vasomotor_rhinitis.aspx. Accessed July 25, 2016.
http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/nonallergic-rhinitis/home/ovc-20179167. Accessed July 25, 2016.
http://www.webmd.com/allergies/nonallergic-rhinitis. Accessed July 25, 2016.
Vaginal Hysterectomy (မိန်းမကိုယ်မှတဆင့် သားအိမ်ခွဲစိတ်ထုတ်ခြင်း)